sawehlor: Recycler virus ကို ဘယ်လို သတ်မလဲ
ကဲ ပို့စ်မတင်ဖြစ်တာလဲ အတော်ကြာပြီ စိတ်ပျက်မိတာလဲ ပါတာပေါ့ . ကျွန်တော့်အဖြစ်က တော်တော်လေးကို စိတ်ပျက်ဖို့ကောင်းတယ်ဗျ . ရန်ကုန်က အင်တာနက်ဆိုင် တစ်ဆိုင်ကနေ မေးလ်သွားသုံးမိ လိုက်တယ် . အဲ့ဒီ့နေ့က သုံးတဲ့ ကွန်ပျူတာကို keylogger ရှိမရှိကို သွားမစစ်မိလိုက်ဘူး . နောက်တစ်ရက်လဲ ရောက်ရော အကောင့်က ပါသွားပါလေရော . အဲ့တော့ ကျွန်တော့်ကို မေးချင်တဲ့သူများ nyinaymin.com@gmail.com အစား konyinaymin@gmail.com ကို invite လုပ်ပေးကြဖို့ အကြံပြုလိုပါတယ် .
ဒီနေ့တော့ စိတ်ပျက်တာကို ဘေးနားမှာထားပြီးတော့ ပို့စ်လေးတစ်ခုကို ရေးလိုက်ပါတယ် . မေးတဲ့သူကတော့ များပါတယ် . အစ်ကိုရယ် recycler virus ကို ဘယ်လို သတ်မလဲတဲ့. အောက်မှာ တင်ပေးလိုက်တဲ့ဖိုင်လေးကို မိမိသုံးနေတဲ့ စက်ထဲမှာ Run လိုက်ပါ . Run ပြီးတာနဲ့ ခဏစောင့်လိုက်ပါ .. အားလုံးပြီးသွားတာနဲ့ စက်ထဲမှာ လုံးဝ ဖျက်လို့မရဘူးဆိုတဲ့ Recycler virus ဖိုင်တွေ အကုန် ပျက်သွားတာကို ၀မ်းမြောက်ဖွယ်ရာ တွေ့ရမှာပါ . အားလုံးအဆင်ပြေမယ်လို့ မျှော်လင့်ပါတယ် .
Posted by saw ehlor at 19:12